Sheekh Hasina oo mar kale loo doortay ra'iisalwasaaraha Bangladesh - BBC News Somali
Sheekh Hasina oo mar kale loo doortay ra'iisalwasaaraha Bangladesh
31 Disembar 2018
Ra'iisalwasaaraha dalka Bangladesh Sheekh Hasina ayaa mar saddexaad loo doorto xilkaasi ka dib doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday shalay oo Axad ahayd, sida uu sheegay guddiga doorashooyinka dalkaasi.
Xisbiga Sheekh Hasina ayaa helay 281 ka mid ah 350 kursi ee uu ka kooban yahay baarlamaanka dalkaasi, waana kuraas ka badan tii uu helay doorashadii tan ka horreysay.
Mucaaradka dalkaasi ayaa cambaareeyay waxa uu ku tilmaamay doorashada "khiyaaliga ah" ee ay hareeyeen rabshado, handadaad iyo eedeymo ah in lagu shubtay doorashadaasi.
Mucaaradka ayaa baarlamaanka ka helay toddobo kursi oo kaliya, waxa ayna codsadeen in doorashadu lagu celiyo.
"Waxaan ugu baaqeynaa guddiga doorashooyinka in si deg deg ah uu laalo natiijadan khiyaaliga ahi," ayuu yiri Kamaal Xuseen oo ah hoggaamiyaha mucaaradka.
"Waxaan dalbaneynaa in sida ugu dhakhsaha badan loo qabto doorasho cusub oo ay maamuleyso dowlad dhexdhexaad ah."
Shacabka Bangladesh oo qabanaya shaqadii booliiska taraafikada!
Qalabkan kuma ciyaari kartid maqalka iyo muuqaalka
Kumannaan qaxootiga Rohingya oo u qaxaya Bangladesh
Guddiga doorashooyinka Bangladesh ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ay meelo badan oo dalkaasi ah ay ka soo gaareen eedeymo ah in doorashada lagu shubtay, arrintaa oo uu sheegay in baaritaan uu ku sameyn doono.
Ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhimatay isku dhacyo dhexmaray taageerayaasha xisbiga haya talada dalka iyo kuwa mucaaradka.
Maxaa lagu dhaliilay doorashadani?
Xisbiga ra'iisalwasaare Sheekh Hasina ee Awami League ayaa dalkaasi Bangladesh soo xukumayay tan iyo sandkii 2009, balse mid ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn mucaaradka ayaa ku eedeeyay in goobaha qaar ee codbixinta uu xisbigaasi keensaday sanaadiiq ay ka buuxaan waraaqaha codbixinta oo been abuur ah.
Afhayeen u hadlay xisbiga BNP ayaa sheegay in wax isdabamarin weyn ay hareysay 221 ka mid ah kuraasta 300 ah ee lagu tartamayay.
Waxyar uun ka hor inta aysan furmin goobaha codbixinta ayaa weriye ka tirsan BBC-da waxa uu goob ka mid ah goobaha codbixinta ee magaalada Chittagon ku arkay sanaadiiq kuwa codbixinta ah oo laga soo buuxiyay waraaqaha codeynta oo horey loo soo saxay.
Sarkaalkii mas'uulka uga ahaa goobtaasi guddiga doorashooyinka ayaa ka gaabsaday in uu ka hadlo arrintaasi.
Wakiilada xisbiga haya talada dalkaasi oo kaliya ayaa ku sugnaa goobtaasi iyo goobo kale oo badan oo ku yaal magaaladaasi oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi.
Ugu yaraan 47 ka tirsan musharrixiinta xisbiga ugu weyn mucaaradka ayaa isaga baxay tartanka, ka hor inta aysan soo xirmin goobaha codbixinta, waxa ayna sheegeen in doorashadu ay hareeyeen handadaad iyo ku shubasho.
Kooxaha kormeerayaasha ahi iyo mucaaradkuba waxa ay isku raaceen in doorashadaasi aysan u dhicin si caddaalad ah, balse xisbiga haya talada dalka ayaa eedeymahaasi ku gacan seyray, waxa uuna ku eedeeyay mucaaradku in ay faafinayaan warar been abuur ah.
Sheekh Hasina ayaa jimcihii la soo dhaafay BBC-du u sheegtay: "Dhan waxa ay jeedinayaan eedeymo. Dhanka kalena, waxa ay weerarayaan shaqaalaha iyo madaxda xisbigayaga. Taasi ayaa ah dhibaatada ugu weyn ee ka jirta dalkayaga."
Maxay doorashadani u tahay muhiim?
Bangladesh waa dal dadkiisu u badan yihiin Muslimiin, waxaana dalkaasi ku nool dad lagu qiyaasay in ka badan 160 milyan oo qof. Dalkaasi ayaa wajahaya dhibaatooyin ka dhashay isbadalka cimilada, kacdoonka mintidiinta islaamiga ahi, saboolnima baahsan iyo musuqmaasuq.
Bangladesh waxaa sidoo kale ku soo qaxay boqolaal kun oo qof oo ka tirsan muslimiinta qowmiyadda laga tirada badan yahay ee Rohingya, ee ka soo qaxay dalka deriska ah ee Myanmar.
Rabshado ayaa hareeyay ololihii doorashadan, waxaana marar badan ay isku dhacyo dhex mareen taageerayaasha xisbiga haya talada dalka iyo kuwa mucaaradka.
Dowladda ayaa sidoo kale wadday hawlgallo cabburin ah oo ka dhan ah dadka mucaaradka ku ah, waxaana dadka dhaliila siyaasadda dowladda ay sheegayaan in xukuumaddu ay noqotay mid kalitalis ah.
Yaa ku tartamayay doorashadani?
Khaleda Zia oo muddo dheer loolan adag kula jirtay Sheekh Hasina ayaa billowgii sanadkan xabsi la dhigay, waxaana laga mamnuucay in ay doorashadani u tartanto sababo la xiriira musuqmaasuq balse waxa ay dhankeeda ku adkeysanaysaa in eedeymahaasi ay salka ku hayaan arrimo siyaasadeed.
Haatanna waxaa mucaaradka majaraha u haya Kamaal Xuseen oo xulufo la ahaa Sheekh Hasina.
Hase yeeshee Kamaal oo 81 jir ah isla markaana ka mid ahaa garyaqaanadii wax ka qoray dastuurka dalkaasi, isuma uusan soo sharixin hoggaanka dalkaasi.
Xisbiga BNP ayaa qaadacay doorashadii sanadkii 2014-kii, waxaana doorashadii shalay dalkaasi ka dhacday ay noqoneysaa tii ugu horreysay oo ay ka qeybqaataan dhammaan xisbiyada waaweyn ee mucaaradka ahi tobankii sano ee la soo dhaafay.
Go'aanka Midowga Afrika muxuu uga dhiganyahay dowladda Soomaaliya?
AFRICOM: 'Muddo kororsiga madaxweynaha ayaa ka khatarsan Al-Shabaab'
5 Saacadood ka hor
Afar arrimood ka ogow doorashada dowladaha Hoose ee Somaliland
Sababta aniga iyo Sambuus aan isku macsalaameynay
"Farmaajo wuxuu ku dayanayaa Afwerki"
18 Abriil 2021
Haweeneyda noqon karta hoggaamiyaha cusub ee Jarmalka
20 Abriil 2021
Kumuu ahaa madaxweynihii la dilay ee Chad Idriss Déby?
Siduu jiidda hore ee dagaalka ugu dhintay madaxweynihii Chad Idriss Déby?
Kumuu ahaa Barafasoor Maxamed Cabdi Xaaji Maxamed (Professor Gaandhi)?
Maxay salka ku haysaa Colaadda Canfarta iyo Soomaalida?
11 Abriil 2021
Taariikhda dalka Jabuuti
9 Abriil 2021
Muxuu yahay xiriirka ka dhaxeeya nooca dhigga qofka iyo u adkeysiga gaajada?
Yaa ka dambeeyay rabshadihii shalay ka dhacay garoonka Muqdisho?
Nin 15 sano iska qaadan jiray lacag isagoo aan shaqada tagin